July 16, 2019 NEWS 4
Dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in ay guud ahaan la wareegtay Amniga Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda maamulka Galmudug, islamarkaana laga wareejiyay maamulka Ahlusunna oo horay gacanta ku hayay.
Dowladda Soomaaliya ayaa si rasmi ah ula wareegtay Amniga Dhuusamareeb, iyadoo Ra’iisul wasaaraha XFS uu kormeer dhiiri-galin ah ugu tagey Ciidanka sugaya Amniga oo ah Ciidankii Booliska & NISA ee horay uga howlgali jiray Galmudug iyo kuwii Ahlu Sunna ee dhawaan la qarameeyey ee ku kala biiray Booliska iyo NISA.
Ciidankaan ayaa la sheegay in ay qeyb ka yihiin Ciidanka suggi doonta Amniga doorashadda maamulka Galmudug, islamarkaana hadda ka dib dowladda Soomaaliya ay gacanta ku heyneyso guud ahaan Ammaanka Caasimada Galmudug.
Ciidanka Ammaanka Magaalada la wareegay ayaa qaarkood kasoo guureen Magaaladda Cadaado oo ay horay uga howlgali jireen.
Ma korihii ma la korinayaa?